स्वास्थ्य पोष्ट दैनिक
औषधिमा आत्मनिर्भर हुने नीति कागजमै सिमित
काठमाडौँ । नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आयात भइरहँदा ‘औषधि उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुने’ नीति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । सरकारले स्वदेशमा उत्पादन हुने औषधिको आयातमा रोक लगाई आत्मनिर्भर
बढ्दै डेंगुको संक्रमण, चार महिनामा ३ हजार ४ सय २५ बिरामी
काठमाडौँ । पछिल्लो समय तराईसहित पहाडि जिल्लामा पनि डेंगुको संक्रमण दर बढ्न थालेको छ । रोक्नथामका लागि विभिन्न सचेतना अभियान चलाए पनि डेंगुको संक्रमणमा कमि आएको छैन । यो झन
राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगको उपाध्यक्षका प्रत्यासीको अनौँठो परीक्षा !
काठमाडौँ । बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगको उपाध्यक्ष पदका प्रत्याशीको बीचमा साउन २६ र २७ गते कार्ययोजना प्रस्तुति गरिने भएको छ । उपाध्यक्ष छनोट समिति सचिवालयका अनुसार ११ जना चिकित्सकले यो
लाइसेन्स परीक्षाको रिजल्ट आयो
काठमाडौंं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सञ्चालन गरेको नाम दर्ता (लाइसेन्स परीक्षा) अन्तर्गत स्नातक तह (एमबीबीएस) र (बीडीएस)को परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ । एमबीबीएस तहका परीक्षामा एक हजार ६८१ ले नाम
नयाँ स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक : के छ नीतिमा ?
काठमाण्डौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ सार्वजनिक गरेको छ । गएको जेठ १० गते नै मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको नीति स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुधबार मात्र आएको
‘सिकलसेल एनिमिया’ झनै बढ्दो
नेपालगञ्ज । “श्रीमानको उपचार गर्न थालेको ६ वर्ष बढी भयो, सात लाख खर्च भयो तर रोग निको नै हुँदैन”, बाँके बैजनाथ गाउँपालिका–३ की शर्मिला थारूले भनिन् । शर्मिलाका श्रीमानलनई निको
आयुर्वेद क्षेत्रको विकासमा जोड
कास्की । आयुर्वेदिक औषधिको बारेमा जनतामा विश्वास जगाउन टोलटोलमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पाइने जडीबुटी जनतालाई चिनाउनुपर्ने र त्यसको सङ्कलन, प्रशोधन तथा बिक्रीवितरणका माध्यमबाट प्रदेश
पोखरा । २१औँ शताब्दीमा परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच नपुगेकै कारण नेपालका ४५ प्रतिशत महिला अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य भएका छन् । गुट्माकर इन्स्टिच्युट, वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र
चितवन । यहाँको सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पतालमा उपचार गर्नका लागि लामो समय पालो कुर्नुपर्छ । प्रचण्ड गर्मीका कारण असिनपसिन भएर पनि यस क्षेत्रका बिरामीको उपचारमा पहिलो रोजाइ भने यही अस्पताल
बागलुङ । पछिल्लो समय गर्भावस्था तथा सुत्करी हुने बेलामा अस्पताल तथा वर्थिङ सेन्टर नपुग्ने कमै हुन्छन् । आम मानिसमा चेतनाको स्तरमा वृद्धि भए पनि यदाकदा चेतनाकै अभावमा सुत्केरी तथा नवजात
याेजनामै सिमित आवासीय विद्यालय
एमसिसी परिमार्जनसहित पास हुन्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड